ထွေရာလေးပါး • Nov 04, 2019
ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်ကြီးမှာ လူဖြစ်နေရတဲ့အခါကျတော့ လူတွေရဲ့နေ့စဥ်ဘဝထဲကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းမျိုးစုံရဲ့ အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ တိုးဝင်လာနေမှုကို တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတာပါပဲ။ နေ့စဥ်နဲ့အမျှ .. smart phone ကနေ စပြီးတော့ smart watch နောက်ဆုံး self lacing sneaker (smart shoe?) အထိ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်း အသစ်အသစ်ပေါင်းများစွာနဲ့ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်ပြီးဖြစ်စေ မိတ်ဆက်ပေးခြင်းခံနေရတယ်။ သေသေချာချာပြန်စဥ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီပစ္စည်းတွေက နေ့စဥ်ဘဝအတွက် မရှိမဖြစ်တွေလား ဆိုပြန်တော့ တစ်ချို့က ဟုတ်တယ်။ တစ်ချို့ကျတော့ မရှိလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် မရှိမဖြစ် ဟုတ်သည်ဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ဖြစ် တကယ်လိုလို မလိုလို ပစ္စည်းအသစ်ထွက်ပြီကြားတာနဲ့ ဒါမှမဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်က တစ်ယောက်ယောက်က ဒီပစ္စည်းလေးကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ မဝယ်တောင်မှ ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာပြီး အနည်းဆုံး youtube မှာ review လေးသွားကြည့်လိုက်ရမှ နေသာထိုင်သာရှိတတ်တာမျိုးကိုး။ နောက်ပြီး ကြိုက်လို့ဝယ်မယ် ဆိုတာတောင် အလွယ်တကူဝယ်မရသေးတဲ့ နိုင်ငံမှာနေရတဲ့ ဒုက္ခကလည်းရှိသေးတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါတွေကတော့ ဝယ်ဝယ် မဝယ်ဝယ် ခုတလော ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာပြီး သွားသွားကြည့်ဖြစ်နေတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒုက္ခလေးတွေအကြောင်းပါ။
Smart watch ဝယ်မယ်ဆိုပြီး review တွေလိုက်ကြည့်နေတာကြာပြီ။ ဒီဇိုင်းအရ ဈေးနှုန်းအရ specs အရ တစ်ခုအဆင်ပြေရင် တစ်ခုကအဆင်မပြေဘူး။ အဲလို ချေးများနေတာ ခုထိပဲဆိုပါတော့။ ကိုယ့်လက်က အတော်လေးသေးတဲ့အထဲမှာပါတော့ လက်ရှိဈေးကွက်ထဲက smart watch အများစုရဲ့ အရွယ်အစားနဲ့က ဘယ်လိုမှ မဆင်မပြေဘူး။ Android wearOS ကိုသုံးထားတဲ့ TicWatch ကိုတော့ သဘောကျပေမယ့် ဒိုင်ခွက် အရွယ်အစားနဲ့ နှစ်ရက်ပဲခံတဲ့ battery နဲ့က အဆင်ပြေဘူး။ Fitbit Versa ကျပြန်တော့လည်း အရွယ်အစားရော specs ရော အဆင်ပြေပေမယ့်လည်း design က Apple Watch နဲ့တူနေလို့ မကြိုက်ပြန်ဘူး။ Apple Watch က design အရကော spec အရကော အဆင်ပြေပေမယ့် ဈေးကအဆင်မပြေ။ ပြီးတော့ ကိုယ်က iPhone သုံးတဲ့သူလည်းမဟုတ်။ ဒီလိုနဲ့ မကြာသေးခင်ကထွက်တဲ့ Amazfit GTR ကိုတွေ့တော့ မဆိုးဘူးလို့ တွေးမိတယ်။ ဈေးကလည်း Lazada က flagship store မှာ S$219 နဲ့ရတယ်။ Battery life ကော design ကော အဆင်ပြေတယ် ပြောရမယ်။ ဒါပေမယ့် Always-On-Display (AOD) မပါသေးတာ တစ်ချက်တော့ ဆိုးတယ်။ ပြီးတော့ GPS လည်း သိပ်မမှန်သေးဘူးလို့ review တွေမှာ ပြောကြတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စောင့်လက်စနဲ့ ဆက်စောင့်ဦးမယ် စိတ်ကူးတာပဲ။ လက်တလော ထွက်သမျှ smart watch တွေက ကိုယ့်အတွက် ခုထိ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသလို ခံစားရတယ်။ နောက်တစ်နှစ်လောက်နေရင်တော့ အဆင်ပြေလောက်ပြီ မျှော်လင့်တာပဲ။ ဟိုးအရင် smart watch ခေတ်ဦးက ထွက်ခဲ့တဲ့ Pebble Watch လောက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတာမျိုး ခုချိန်မှာ ပြန်မတွေ့ရသေးဘူး။
Amazfit GTR (From https://en.amazfit.com/gtr.html)
စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာတာကတော့ Google က Fitbit ကို ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပဲ။ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာ သေချာပြောမရသေးပေမယ့် ဖြစ်နိုင်တာကတော့ wearable နဲ့ ပတ်သက်ရင် ရှေ့ကိုအတော်လေးရောက်နေပြီးဖြစ်တဲ့ Apple ကို အမှီလိုက်ဖို့ ခြေလှမ်းပြင်လိုက်တယ်လို့ ယူဆရတာပဲ။
Google officially acquires Fitbit for $2.1 billion https://t.co/lC5MJU4aMZ
— XDA Developers (@xdadevelopers) November 1, 2019
Smart Phone ကတော့ ဒီအတောအတွင်းအတော်လေး အာရုံစိုက်ပြီး လိုက်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Huawei P9 ကလည်း သုံးနှစ်ကျော်နေပြီဆိုတော့ အတော်လေး အခြေအနေဆိုးနေတယ်။ Camera App တစ်ခါပွင့်ဖို့ ၄-၆ စက္ကန့်လောက် စောင့်ရတယ်။ အဲဒါနဲ့ အသစ်ထွက်တဲ့ phone review တွေကို တောက်လျှောက်လိုက်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် Techtober လို့ခေါ်တဲ့ Google Pixel4 ကို ကြေညာမယ့် October လကို မျှော်လင့်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မတော်တဆမဟုတ်ပဲ တမင်တကာလုပ်တယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ပေါက်ကြားမှုတွေကြောင့် မကြေညာခင် သုံးလေးပတ်လောက်အလိုထဲက design အစ specs အဆုံးအကုန်သိပြီးသား ဖြစ်နေပြီ။ တကယ် launch လုပ်တဲ့ Oct 15 ည event မှာ ဘာအံ့သြစရာများ လုပ်ပြဦးမလဲလို့ စောင့်ကြည့်မိသေးပေမယ့် အားလုံးနီးပါးက သိပြီးသားတွေပဲ ပြောသွားတာပါပဲ။ အဓိက ဇမ်းတင်ပြီး ပြောသွားတဲ့ Project Soli ရဲ့ gesture တွေကလည်း ပြည့်စုံတဲ့ အဆင့်တစ်ခုကို ရောက်လာဖို့ လိုအပ်နေသေးတယ်။ ပထမဆုံး ပွဲဦးထွက်ဖြစ်နေလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
I need wide angle len, on-screen fingerprint sensor, without pop-up front-facing camera and not less than 3200 mAh. https://t.co/d2pPZBbGHj
— Arkar Aung (@darkar1001) July 30, 2019
Pixel4 ရဲ့ Design ကို သဘောကျပေမယ့် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ feature တွေ တော်တော်များများ ပါမလာတော့ မဝယ်ဖို့ စိတ်ကိုဒုန်းဒုန်းချလိုက်တယ်။ အထူးသဖြင့် battery ကို အတော်လေး စိတ်ပျက်မိတယ်။ ပြီးတော့ Google က လက်ရှိဈေးကွက်ကို ဂရုမစိုက်ပဲ သူလုပ်ချင်တာကိုပဲ ခေါင်းမာမာနဲ့ လုပ်ပြလိုက်ပုံရတယ်။ ဥပမာ - တခြား flagship ဖုန်း အာလုံးနီးပါးမှာ ပါတဲ့ ultra wide len ကို မထည့်ပဲ telephoto က ပိုအသုံးဝင်ပါတယ် ဆိုတာမျိုး။ နောက်ပြီး Standard storage ကို 64GB ပဲထားပြီး 4K videos ကို 30fps နဲ့ပဲ support ပေးတာက 60fps နဲ့ဆိုရင် တစ်မိနစ်ကို 500 MB လောက်နေရာယူလို့ လူတွေက သိပ်မရိုက်ကြဘူးဆိုပြီး ဆင်ခြေပေးတာမျိုးပေါ့။ တစ်ခုရှိတာက Pixel ကို "camera phone" လို့တင်စားပြီးခေါ်ကြပေမယ့် တခြား flagship တွေနဲ့ အရင်ကလိုမျိုး သိသိသာသာကြီး မကွာဟတော့တာကို ဒီလို Camera comparison review တွေမှာ တွေ့နေရပြီ။
— Afraid by Google 👻 (@madebygoogle) October 20, 2019
Pixel4 ကို မျှော်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းတစ်ခုက stock android ကြောင့်ပဲ။ လက်ရှိ Huawei ရဲ့ Emotion UI (EMUI) တောင် ခံစားလို့မရလို့ Nova Launcher နဲ့ သုံးနေရတယ်။ Xiaomi ရဲ့ flagship killer K20 Pro ဆိုရင်လည်း specs က အဆင်ပြေပေမယ့် သူ့ရဲ့ MIUI ကို မကြိုက်လို့ ပယ်စာရင်းထဲ ထည့်လိုက်ရတယ်။ ဧရာမ icon ကြီးတွေနဲ့ Samsung ရဲ့ One UI လည်း ထိုနည်းတူစွာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ Asus ရဲ့ ROG Phone II ထွက်လာတော့ အတော်လေး သဘောကျမိတယ်။ Specs ကလည်း Gaming phone ဆိုတော့ အတော်လေးမြင့်တယ်။ 6000mAh Battery ရယ် Snapdragon 855+ ရယ် 120Hz AMOLED 10-bit HDR display ရယ်ဆိုတာ mobile game ဆော့တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ အံကိုက်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က phone နဲ့ game သိပ်ဆော့တဲ့သူမဟုတ်တော့ ဟန်မကျလှဘူး။ Battery ကကြီးတော့ ဖုန်းရဲ့ အလေးချိန်က 240 grams (8.47 ounces) လောက် လေးသွားတယ်။ ပြီးတော့ camera performance က သာမန်အောက်လို့တောင် ပြောလို့ရတယ်။
OnePlus 7T (From https://www.oneplus.com/7t/design)
ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံး ဝယ်ဖြစ်လိုက်တာကတော့ OnePlus 7T ပါပဲ။ အဓိကကတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ specs တွေနဲ့ အများဆုံးနီးစပ်မှုရှိလို့ လို့ပဲပြောရမှာပဲ။ ဒီလိုပြောတော့ OnePlus 7T Pro ရဲ့ specs က ပိုမမြင့်ဘူးလားလို့ မေးစရာရှိမယ်။ ပိုမြင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 7T Pro ရဲ့ Dual curved edge display ရယ် Pop up front facing camera ရယ်ကို မကြိုက်လို့ အဝတ်လျှော်စက်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ (😂) 7T ကိုပဲ ရွေးဖြစ်သွားပါတယ်။ OnePlus ရဲ့ နံမည်ကြီး Oxygen OS ကိုလည်း စမ်းသုံးကြည့်ချင်တာလည်း ပါတယ်။ Pixel ပြီးရင် Android OS update အစောဆုံးလည်းရတယ်။ UI ကလည်း အတော်လေး ရိုးရှင်းမှုရှိတယ်။ ပြီးတော့ bloatware လို့ခေါ်တဲ့ ဖြုတ်မရပြုမရတဲ့ apps တွေရဲ့ ရန်ကလည်း ကင်းတယ်။ 90Hz refresh rate နဲ့ display ကိုလည်း သုံးကြည့်ချင်တယ်။ အဓိက အားသာချက်ကတော့ Pixel4 လိုမဟုတ်ပဲ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ ရတဲ့ specs နဲ့က တန်တယ်လို့ ခံစားရတယ်။ အားနည်းချက်ကတော့ Pixel မဟုတ်တာပဲ။ တကယ်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်က P9 မဝယ်ခင် OnePlus3ကို ဝယ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန် ရန်ကုန်မှာက OnePlus လို့ပြောရင် ဖုန်းဆိုင်တော်တော်များများက ဘာဖုန်းလည်း ပြန်ပြန်မေးနေကြတဲ့ အချိန်၊ OnePlus ဝယ်လို့ရတဲ့ဆိုင် နှစ်ဆိုင် သုံးဆိုင်မှာလည်း ပစ္စည်းပျက်နေတော့ စိတ်လျှော့ပြီး Leica camera နဲ့ P9 ကိုဝယ်ဖြစ်ခဲ့တာ။
အခု ဒီ post ကိုရေးနေတဲ့အချိန်အထိ ဖုန်းက Pre-order မှာထားတုန်းဆိုတော့ စာရွက်ပေါ်က specs နဲ့ တကယ့် performance နဲ့ ဘာကွာလဲဆိုတာ သေချာတော့ မပြောနိုင်သေးဘူး။ နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာ ရောက်မယ်တော့ ပြောတာပဲ။ လက်ထဲကို ဖုန်းရောက်လာမှ သေချာသိရမယ်။
Nintendo Switch Lite ကတော့ သက်သက် ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာပြီး review တွေ သွားသွားကြည့်ဖြစ်နေတာပါ။ အဓိကကတော့ Mario ဆော့ချင်လို့လည်း ပါတယ်။ ခု Switch Lite က သူရှေ့က Switch ထက်စာရင် S$130 လောက် သက်သာတယ်။ သွားရင်းလာရင်း ကားပေါ် ရထားပေါ် လေယာဥ်ပေါ်မှာ ဆော့ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်ထားတာ။ Console က အသေဆိုတော့ ခလုတ်တစ်ခုခု ပျက်သွားရင် Switch လိုမျိုး အသစ်ဝယ်လို့မရဘူး။ Service center ကိုပို့မှရမယ်။ ပြီးတော့ TV နဲ့ တွဲဆော့လို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် တကယ်ဝယ်ဖို့ စဥ်းစားကြည့် ပြန်တော့လည်း နှမျောနေပြန်ရော။ ကိုယ်လည်း ငယ်ငယ်တုန်းကလို တနေကုန် တနေခန်း ထိုင်ဆော့နေနိုင်တာမှ မဟုတ်တာ။ ပြီးတော့ screen သေးသေးလေးနဲ့ ဆော့ရင် မျက်လုံးထိမှာ စိုးရတယ်။ ဒါပေမယ့် မလိုချင်ဘူးလားမေးရင်တော့ လိုချင်တာပါပဲ။
Nintendo Switch Lite (From https://www.nintendo.com/switch/lite/)
Privacy Certified ESRB
Headphones တွေဆိုလည်း ကိုယ့်မှာရှိပြီးတာတောင်မှ အသစ်တွေကို review မှာ သွားသွားပြီး သရေကျတုန်းပဲ။ Headphone ကျတော့ အလုပ်လုပ်လည်းတပ်၊ ကားပေါ်မှာလည်းတပ် ဆိုတော့ နေ့စဥ်နေ့တိုင်း အတော်လေး သုံးဖြစ်တဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုလို့တောင် ဆိုရမယ်။ နောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ smart ဖုန်း အကုန်လုံးနီးပါးမှာ 35mm jack အပေါက် မပါလာတော့ဘူးဆိုတော့ တော်တော်များများ က wireless ဘက်ကို အာရုံစိုက်လာကြတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လကျော်ကျော်လောက်ကမှ သေသေချာချာ စဥ်းစား.. စိတ်ကိုဒုန်းဒုန်းချပြီး Audio Technica က ATH-M50xBT ကို ဝယ်ဖြစ်လိုက်ပေမယ့် ဒီ review တွေမြင်တော့ ကိုယ်ဝယ်လိုက်တာပဲ စောသွားသလိုဖြစ်နေတယ်။
တလောက Chi-fi လိုခေါ်တဲ့ တရုတ်ကထုတ်တဲ့ နားကြပ်တွေ ခေတ်ထလာတာကို သတိထားမိတော့ ကိုယ်လည်း တလုံးဝယ်မလို့ ကြံစည်နေပေမယ့် လက်တလော အိမ်မှာရှိပြီး နားကြပ်တွေကို အားနာလာတာရယ် ၊ မလိုပဲနဲ့သုံးလို့ ပိန်သွားမယ့် ကိုယ်ပိုက်ဆံအိတ်လေးကို အားနာတာနဲ့ မဝယ်ဖြစ်ဘူး။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ရုံးက Collegue တစ်ယောက်က နားကြပ်ဝယ်…
အစောပိုင်းက ပြောခဲ့သလိုပဲ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းအသစ်အသစ်တွေကတော့ လိုက်မမှီအောင်ကို ထွက်နေကြတာပါပဲ။ အမျိုးအစားများလာတာနဲ့ အမျှ ကိုယ့်ဘက်က ရွေးချယ်ခွင့်များလာတယ် ဆိုပေမယ့်လည်း များလွန်းလို့ ဘာရွေးရမှန်းမသိတာကလည်း ဒုက္ခတစ်မျိုးပါပဲ။ ပြီးတော့ ကိုယ်ဝယ်ပြီး ဘယ်လောက်မှမကြာဘူး Model အသစ် specs အမြင့်တွေက ထပ်ထပ်ထွက်နေတာကို သိနေတော့ ခုပဲ ဝယ်ရတော့မလား နည်းနည်းလေးပဲ ထပ်စောင့်လိုက်ရမလားဆိုပြီး ချည်တုန်ချတုန်ဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခကလည်း မသေးဘူးဗျာ။ အဲတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မဝယ်ခင်တော့ review တွေသေချာကြည့်ပြီးမှ ဝယ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဝယ်ပြီးမှဒုက္ခများတာထက်စာရင် မဝယ်ခင် research လေးလုပ်လိုက်တာက အချိန်နည်းနည်းပိုကုန်ပေမယ့် ဝယ်ပြီးရင် စိတ်မညစ်ရဘူးပေါ့။ အခြားသူတွေတော့ မပြောတတ်ပေမယ့် ကိုယ်ကတော့ ဝယ်ဝယ် မဝယ်ဝယ် အသစ်ထွက်တဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်း review တွေကြည့်ပြီး သရေကျပေါ့။ ငယ်ငယ်တုန်းကထွက်တဲ့ ပြိုင်ဘက်အခွေထဲက သီချင်းလိုပဲလေ။
"ကုန်ပစ္စည်းတွေ ဝယ်မသုံးလည်း ကြော်ငြာတော့ ကြည့်ခွင့်ရှိတယ်" ပေါ့။ 😂
Cover Photo by Aditya Sharma on Unsplash